> Resource > Ladnaansho > Sidee ayaan u soo kaban karto, Data ka dib markii masax digsi
Waxaan ka qoysay oo digsi soo kaban karto, Data?
Hi oo dhan, waxaan si qalad ah ku qoysay oo aan drive adag oo haatan ka walwalsan tahay in aan mar kale dib u heli doonaa in aan collection of music iyo sawiro ku wadid in ay adag tahay waxaan ahay. Ma jiraa wax aan ka soo kaban karto xogta disk tirtiraa? Qof fadlan i caawi
Ha noqon mid aad u walaacsan yahay. Maqaalkani waxa uu dhab ahaan waxa aad u baahan tahay inuu ka soo kabsado files lumay ka ah drive ku qoysay oo adag yahay. Qirid aasaasiga ah oo ku saabsan files aad disk ku qoysay oo ay tahay in aan si dhab ah weligiis tirtiraa. Kaliya marka aad saaray xogta cusub ku disk files badiyay noqon doono sida macquulka ah si joogto ah la waayay. Taas macnaheedu waa in aad u baahan tahay si ay u joojiso isticmaalka wadid aad u adag oo ay qaadaan tallaaboyin si degdeg ah u soo kabsado ka dib markii xogta disk tirtiro.
Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac waa qoysay utility ah soo kabashada xogta disk cajiib ah oo aad u. Waxay bixisaa xal loo helo iyo khatar la'aan inay dib u soo ceshano dhow wax kasta oo aad lumay wadid aad ku qoysay oo ay adag tahay, oo ay ku jiraan images, videos, files qoraalka, files audio, iwm
Waxaad ka heli kartaa version maxkamad barnaamijka Wondershare Data Recovery inuu ka soo kabsado xogta ka disk ku qoysay oo hadda ah. Version maxkamad Arintan waxay u sahlaysaa in aad baarista disk ku qoysay oo u files badiyay intaadan gadan nooca buuxda inuu ka soo kabsado iyaga.
Kabsado Data ka dib markii Disk masax in 3 Talaabooyinka
Haddaba ee ay isticmaalaan Windows version of Wondershare Data Recovery si ay u qabtaan ku qoysay oo soo kabashada xogta disk.
Tallaabada 1 Select hab kabashada inuu ka soo kabsado xogta lumay ka ah drive ku qoysay oo adag
Waxaad arki doontaa 3 hababka soo kabashada ka dib markii laga bilaabo Wondershare Data Recovery on your computer. Sida aynu doonayno inaynu u soo kabsado xogta ka disk ku qoysay, aynu dooro "Recovery ah Barzakh," hore.
Tallaabada 2 Scan maqaal qoruhu disk aad ku qoysay
Markaasay aad u baahan tahay in ay doortaan aad disk qoysay oo riix badhanka "Next" in ay sii wadaan. Barnaamijku wuxuu ku disk in iskaan doonaa maqaal qoruhu markaas.
Marka iskaanka Risaalo la dhammeeyo, oo dhan maqaal qoruhu disk aad ku qoysay oo la soo daabici doonaa. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay doortaan mid ka mid ah oo guji "Start" in iskaanka u xijaab badiyay aad disk tirtiraa.
Tallaabada 3 Ladnaansho xogta ka disk ku qoysay oo sida aad rabto
Ka dib markii iskaanka, xogta ku qoysay oo aad disk lagu soo bandhigi doonaa "nooca File" iyo "Jidka". Waxaad ka arki kartaa magacyada file in lagu hubiyo sida badan ee aad files lumay la dib ula karo.
Markaas waxaad karaan faylasha aad doonaysid in aad dib u soo ceshano oo guji "Ladnaansho" iyaga badbaadiya on your computer.
Fiiro gaar ah: Fadlan ha badbaadiyo xogta soo kabsaday dib si aad u disk ku qoysay oo inta lagu guda jiro soo kabashada si looga fogaado xogta overwritten.